အိမ်မှာနေရင်း သနပ်ခါး Campaignမှာပါဝင်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်နေတဲ့ လူထုကြီးကို အန္တရာယ်အပေါင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ မမသင်ဇာ – Online News Post
အိမ်မှာနေရင်း သနပ်ခါး Campaignမှာပါဝင်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်နေတဲ့ လူထုကြီးကို အန္တရာယ်အပေါင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ မမသင်ဇာ
မင်း သမီး သင်ဇာဝင့်ကျော် က တော့ အောင်မြင် လျက် ရှိနေတဲ့ အနုပညာ ရှင်တွေ ထဲမှာ တစ်ယောက် အပါအဝင် ဖြစ်ပြီး အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက် လက်လုပ်ကိုင် နေကာ ကြော်ငြာ တွေ ကိုလည်း ရိုက်ကူး လျက် ရှိနေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကို အခိုင် အမာ ရယူထား နိုင်ခဲ့တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် က တော့ လူထု လှုပ်ရှားမှု တွေမှာ လည်း ကိုယ်တိုင် ပါဝင် နေတာဖြစ် သလို ပါဝင် နေကြတဲ့ ပြည်သူ တွေကိုလည်း စားစရာတွေ လှူဒါန်းလေ့ ရှိပါတယ် … .
ယနေ့ မှာ တော့ ပြည်သူ တွေ များစွာ နဲ့ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင် တွေ များစွာ ဟာ သနပ်ခါး ကမ်ပိန်းတွေ ပြုလုပ်နေ ကြပြီး ပါးပြင် ပေါ်မှာ သနပ်ခါး တွေကိုယ်စီ လိမ်းခြယ် ကာ လူထု လှုပ်ရှားမှု မှာ တက်တက် ကြွကြွ ပါဝင်နေ ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် … . သင်ဇာဝင့်ကျော် က တော့ အိမ်မှာနေရင်း နဲ့တောင် သနပ် ခါး Campaign မှာပါဝင် နေပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ လူထုလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်နေကြသူတွေကို ဘေးကင် းစေဖို့ ဆုတောင်းပေးနေခဲ့ပါတယ်။
သင်ဇာဝင့်ကျော် က တော့ ” ငြိမ်းချမ်း စွာ ဆန္ဒပြ နေတဲ့ ပြည်သူများ ဘေး ရန် ကင်းကြ ပါစေ ၂၅.၂.၂၀၂၁သနပ်ခါး တိုက်ပွဲ နွေဦးတော်လှန်ရေး အရေးတော်ပုံ အောင်ရ မည် “ ဆိုပြီး လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက်မှာ ရေးသားထား ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါ တယ် … . သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြား လေးနဲ့ မြင်ရ သူတိုင်းကို အချစ်ပို စေ ခဲ့ တဲ့ မင်းသမီး သင်ဇာဝင့်ကျော် ရဲ့ ချစ် စရာ ပုံရိပ် လေးတွေ ကို ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပြီး အဆိုပါ ပုံရိပ်လေး တွေကို အောက်မှာ ကြည့် နိုင် ပါ တယ် နော် … .
source : Thin Zar Wint Kyaw ‘ S Facebook Acc
မင္း သမီး သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ က ေတာ့ ေအာင္ျမင္ လ်က္ ရွိေနတဲ့ အႏုပညာ ရွင္ေတြ ထဲမွာ တစ္ေယာက္ အပါအဝင္ ျဖစ္ၿပီး အႏုပညာ အလုပ္ေတြကို ဆက္ လက္လုပ္ကိုင္ ေနကာ ေၾကာ္ျငာ ေတြ ကိုလည္း ရိုက္ကူး လ်က္ ရွိေနခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ပရိသတ္ ေတြရဲ့ ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈကို အခိုင္ အမာ ရယူထား နိုင္ခဲ့တဲ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ က ေတာ့ လူထု လႈပ္ရွားမႈ ေတြမွာ လည္း ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ ေနတာျဖစ္ သလို ပါဝင္ ေနၾကတဲ့ ျပည္သူ ေတြကိုလည္း စားစရာေတြ လႉဒါန္းေလ့ ရွိပါတယ္ … .
ယေန႔ မွာ ေတာ့ ျပည္သူ ေတြ မ်ားစြာ နဲ႔ နာမည္ႀကီး အႏုပညာရွင္ ေတြ မ်ားစြာ ဟာ သနပ္ခါး ကမ္ပိန္းေတြ ျပဳလုပ္ေန ၾကၿပီး ပါးျပင္ ေပၚမွာ သနပ္ခါး ေတြကိုယ္စီ လိမ္းျခယ္ ကာ လူထု လႈပ္ရွားမႈ မွာ တက္တက္ ႂကြႂကြ ပါဝင္ေန ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္ … . သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ က ေတာ့ အိမ္မွာေနရင္း နဲ႔ေတာင္ သနပ္ ခါး Campaign မွာပါဝင္ ေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လူထုလႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ေနၾကသူေတြကို ေဘးကင္ းေစဖို႔ ဆုေတာင္းေပးေနခဲ့ပါတယ္။
သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ က ေတာ့ ” ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ ဆႏၵၿပ ေနတဲ့ ျပည္သူမ်ား ေဘး ရန္ ကင္းၾက ပါေစ ၂၅.၂.၂၀၂၁သနပ္ခါး တိုက္ပြဲ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရ မည္ “ ဆိုၿပီး လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ ထက္မွာ ေရးသားထား ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါ တယ္ … . သနပ္ခါး ပါးကြက္ၾကား ေလးနဲ႔ ျမင္ရ သူတိုင္းကို အခ်စ္ပို ေစ ခဲ့ တဲ့ မင္းသမီး သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ ရဲ့ ခ်စ္ စရာ ပုံရိပ္ ေလးေတြ ကို ျပန္လည္ ေဖာ္ၿပ ေပးလိုက္ၿပီး အဆိုပါ ပုံရိပ္ေလး ေတြကို ေအာက္မွာ ၾကည့္ နိုင္ ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် မြန်မာပြည်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အမှန်တရားကို ရဲရဲဝင့်ဝင့်ကြီး ရပ်တည်ပေးလိုက်တဲ့ Miss Myanmar မလေး (ဗီဒီယို)
Next post ငြိမ်းအေးစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်နေကြတဲ့ လူထုကြီးကို ချစ်တီးထမင်း စတုဒီသာများနဲ့ ကျွေးမွေး အလှူပြုခဲ့တဲ့ အောင်လေး